Ngabe Sikhona Isikhathi Esingcono Sokwethula Inethiwekhi Yomphakathi Entsha? | Martech Zone
Ngabe Sikhona Isikhathi Esingcono Sokwethula Inethiwekhi Yomphakathi Entsha?
NgoLwesithathu, Januwari 17, 2018 NgeSonto, uJanuwari 21, 2018 Douglas Karr
Ngichitha isikhathi esincane kakhulu ezinkundleni zokuxhumana. Phakathi kwama-algorithm anamaphutha nokungavumelani okungahloniphi, isikhathi esincane engisichitha kwezokuxhumana, ngijabula ngokwengeziwe.
Abanye abantu engihlanganyela nabo ukungeneliseki kwami ​​bangitshele ukuthi kube yiphutha lami. Bathe yingxoxo yami evulekile ngezepolitiki eminyakeni embalwa edlule eyavula umnyango. Ngangikholelwa ngokweqiniso ekusoleni obala - ngisho nasekusoleni obala kwezepolitiki - ngakho-ke ngangiziqhenya ngezinkolelo zami futhi ngazivikela eminyakeni edlule. Akusebenzanga kahle. Ngakho-ke, ngonyaka odlule ngenze umzamo wokubambisana wokugwema ukuxoxa ngezepolitiki online. Into ethokozisayo ukuthi abangichasayo basengamaphimbo njengakuqala. Ngicabanga ukuthi ngokwethembeka babefuna nje ukuthi ngithule.
Ukudalulwa okugcwele: Ngingumuntu weirdo wezepolitiki. Ngiyazithanda ipolitiki ngoba ngiyazithanda ezokumaketha. Futhi ukuthambekela kwami ​​kuyamangaza impela. Ngokwami, ngiyaziphendulela ukusiza ukwenza umhlaba ube indawo engcono. Esifundeni, ngikhululekile futhi ngiyayithanda intela yokusiza abanye abadinga usizo. Kuzwelonke, noma kunjalo, ngikholwa ukuthi sesilindwe kakhulu ushintsho.
Angisona isisulu, kepha umphumela wenkululeko yami ungivulela ithuba lokuhlaselwa yiwo wonke umuntu. Abangane bami abancike kwesobunxele kuzwelonke bakholelwa ukuthi ngiyi-backwoods, umsebenzi wephiko langakwesokudla. Abangane bami abathembele endaweni yangakini bayazibuza ukuthi kungani ngihlangana nabantu abaningi kangaka. Ngokwami, ngiyakudelela ukufakwa ilebula kunoma iyiphi indlela. Angicabangi ukuthi kudingekile ukuzonda yonke into mayelana nomuntu noma umbono wezepolitiki uma ungavumelani nomuntu oyedwa noma isici salowo mbono. Ngamanye amagama, ngingaqonda ezinye zezinguquko zenqubomgomo ezenzeka namuhla ngaphandle kokuhlonipha osopolitiki abazenzile.
Emuva ekuxhumaneni nomphakathi.
Ngikholwe ukuthi isithembiso esimangalisayo semidiya yezenhlalo ukuthi singathembela, sazisane, sizwane futhi sisondelane. Hawu, ngabe nganginephutha. Ukungaziwa kwemithombo yezokuxhumana kuhlangene namandla okungewona omuntu okukhiphela ngaphandle abantu ongase ubakhathalele kubi kabi.
Amanethiwekhi omphakathi aphukile, futhi amandla akhona ayenza ibe yimbi (ngombono wami).
On Twitter, Amahemuhemu athi uma uvinjelwe @mayelasaenzphoto, ukhonjwe njenge nati yephiko langakwesokudla futhi ukuvinjelwa - okusho ukuthi izibuyekezo zakho aziboniswa ekusakazweni komphakathi. Angazi ukuthi kuliqiniso yini, kepha ngibonile ukuthi ukukhula kwami ​​bekumi kancane. Ingxenye esabekayo yalokhu ukuthi ngiyayithokozela i-Twitter. Ngihlangana nabantu abasha, ngithole izindaba ezimangazayo, futhi ngithanda ukwabelana ngokuqukethwe kwami ​​lapho.
Ngibuzile @jack, kepha ngendlela evulekile yangempela - kusamele ngizwe impendulo.
Hey @jack, Ngingumlandeli omkhulu ka @twitter futhi ngabona ngingaba #ukuvinjelwa. Ngingathanda ukuthi ufunde ama-tweets ami futhi ungitshele ukuthi yini, ngezombusazwe yami, enonya noma engahloniphi. Impela ngidumele ukubona lokhu. Uma uvimbela abantu abanengqondo njengami - lokho kungaphezu kokwesabekayo.
- Douglas Karr (@nomfundo_m) January 15, 2018
On Facebook, bayavuma ukuthi manje bahlunga okuphakelayo kungxoxo ezengeziwe zomuntu siqu. Lokhu, ngemuva kweminyaka yokuphoqa izinkampani ukwakha imiphakathi, kube sobala kakhulu ekusebenzisaneni kwazo nabathengi namabhizinisi, nezinkampani ezitshala izimali ekwakhiweni kwezinhlangano, ezishintshayo, kanye nokubika. I-Facebook ivele yadonsa ipulaki esikhundleni salokho.
Ngombono wami othembekile, ukushiywa ngokuzifihla kokuthambekele kwezepolitiki kuyingozi kakhulu kunokuncika uqobo. Anginankinga nokuhlola kukahulumeni kuma-akhawunti wezenhlalo lapho ama-akhawunti akhuthaze khona umsebenzi ongekho emthethweni, kepha nginenkinga enkulu yokuthi izinkampani zilungisa impikiswano buthule ngendlela ezithandayo. I-Facebook ishiya ngisho nemithombo yezindaba ize ivote ngokujwayelekile. Ngamanye amagama, i-bubble izoqiniswa ngokwengeziwe. Uma idlanzana lingavumelani, akunandaba - bazonikezwa umyalezo weningi noma kunjalo.
Kufanele Kubekhona Inethiwekhi Yokuxhumana Engcono
Abanye abantu bakholelwa ukuthi i-Facebook ne-Twitter yilokho esikunamathele kukho. Iningi lamanethiwekhi lizamile ukuncintisana futhi konke kwehlulekile. Sasho into efanayo ngeNokia neBlackberry uma kukhulunywa ngezingcingo eziphathwayo. Angingabazi ukuthi inethiwekhi entsha ingabusa futhi izobusa emakethe lapho isebenzisa inkululeko efanayo eyenza impumelelo ye-Twitter ne-Facebook.
Inkinga akuyona imibono emibi, imikhuba emibi. Asisalindelekile ukuthi ngenhlonipho singavumelani nalabo esingavumelani nabo. Ukulindela kwanamuhla kungukuhlazeka, ukuhlekisa, ukuhlukumeza, nokuvala umlomo lowo ophikisayo. Iziteshi zethu zezindaba zibonisa lokhu kuziphatha. Ngisho nosopolitiki bethu sebekwamukele lokhu kuziphatha.
Ngingumlandeli omkhulu wokuba nemicabango eyehlukene. Angikwazi ukungavumelani nawe bese ngizihlonipha izinkolelo zakho. Ngeshwa, ngamaqembu amabili, kubonakala ngathi sihlangana ngaphezulu kwekhanda kunokuqhamuka nesisombululo phakathi esihlonipha bonke.
Lokhu Kuhlangene Konke Nokumaketha?
Lapho ama-mediums (izindaba, usesho, kanye nabezindaba zenhlalo) kutholakala ukuthi bayazigaxa kwezepolitiki, kuthinta wonke amabhizinisi. Kuyangithinta. Angingabazi ukuthi izinkolelo zami zibe nomthelela ebhizinisini lami. Angisasebenzeli abaholi embonini yami engangibabheka ngokweqiniso futhi ngafunda kubo ngoba bafunda imibono yami ezindabeni zepolitiki futhi bafulathela.
Futhi manje sibuka njengoba amaqhawe obulungiswa bezenhlalo ohlangothini ngalunye lwe-spectrum ephethe ama-brand aziphendulela lapho ebeka khona izikhangiso zawo, nokuthi abasebenzi babo bathini ku-inthanethi. Bakhuthaza ukuduba… okungagcini nje ngokuthinta abaholi bamabhizinisi, kodwa bonke abasebenzi abangaphakathi nemiphakathi ebazungezile. I-tweet eyodwa manje ingasusa intengo yesitoko, ilimaze ibhizinisi, noma ukubhubhisa umsebenzi. Angisoze ngafuna ukuthi labo abangavumelani nemibono yami bajeziswe ngokwezezimali ngenxa yabo. Lokhu kukhulu kakhulu. Lokhu akusebenzi.
Umphumela wakho konke lokhu wukuthi amabhizinisi ahoxa ezinkundleni zokuxhumana, awakwamukeli. Amabhizinisi aya ngokusobala, hhayi okusobala. Abaholi bamabhizinisi bafihla ukweseka kwabo imibono yezombangazwe, hhayi ukuyikhuthaza.
Sidinga inethiwekhi yokuxhumana engcono.
Sidinga uhlelo oluvuza ukuhlonipha, ukuhlengwa kanye nenhlonipho. Sidinga uhlelo oluthuthukisa imibono ephikisayo esikhundleni sokwenza amakamelo we-echo ethukuthele. Sidinga ukufundisana futhi sivezelane kweminye imibono. Sidinga ukubekezelela eminye imibono.
Asikho isikhathi esingcono njengamanje sokwakha inkundla yokuxhumana nabantu kanjena.
Khulisa Ukumaketha Kwakho Okungenayo ngalolu Hlu Lokuhlola Lokuhola
Yini Eguqukile Ngokubhuloga Kwebhizinisi Eminyakeni Edlulile?